China EPP Cooler Box orinasa sy mpamatsy | Huizhou
Boaty mangatsiaka kokoa EPP, miaraka amin'ny fomba fijery mitovitovy amin'ny vata fampangatsiahana EPS taloha, nefa vita amin'ny karazan-javatra vita amin'ny foam vaovao misy fahombiazana tsara kokoa, faharetana tsara kokoa raha tsy misy sombin-tsolika manidina etsy sy eroa toy ny nataon'i EPS. Ankoatr'izay, kilasy sakafo izy ireo ary tena sariaka amin'ny tontolo iainana.
Vata mangatsiaka kokoa EPP (Polypropylene nitarina)
1.EPP boaty mangatsiaka kokoa, miaraka amin'ny fomba fijery mitovitovy amin'ny vata fampangatsiahana EPS taloha, nefa vita amin'ny karazan-java-bolo vaovao misy fahombiazana tsara kokoa, faharetana tsara kokoa raha tsy misy sombin-tsolika manidina etsy sy eroa toy ny nataon'i EPS. Ankoatr'izay, kilasy sakafo izy ireo ary tena sariaka amin'ny tontolo iainana.
2.EPP.ie polypropylene nitarina, dia karazan-fitaovana vao haingana novolavolaina. Izy io dia avo henjana, lanja maivana ary miaraka amina fitondran-tena mafana tsara mba tsy mora simba izy ireo ary manome fiarovana buffer tsara indrindra ho an'ny vokatrao ary hitazona hafanana marin-toerana ao anaty boaty. Vita amin'ny fitaovana ara-tontolo iainana izy io izay azo ampiasaina miverimberina ary farany ho simba aorian'ny fampiasana azy.
3.Etsy ankoatry ny fahombiazany tsara indrindra amin'ny fiarovana sy ny insulation, dia mahatohitra fifandonana izy ireo ary azo diovina mora foana. Heverina fa ampiasaina amin'ny fanaterana entana, matetika sakafo vaovao, sakafo ary fanafody.
4.It dia azo ampanjifaina miaraka amin'ny kojakoja ilaina.
1.EPP boaty mangatsiaka kokoa dia natao ho an'ny vokatra misy kaontenera ary koa ny fisorohana ireo entana ao anaty fifanakalozana rivotra mangatsiaka sy mafana na conduction amin'ny ambient ivelany.
2. Ho an'ny sehatry ny sakafo vaovao dia ampiasaina amin'ny fitaterana vokatra vaovao, mora simba ary mahamay, toy ny: hena, hazan-dranomasina, voankazo sy legioma, sakafo voaomana, sakafo mangatsiaka, gilasy, sôkôla, vatomamy, mofomamy, mofomamy, fromazy, voninkazo, ronono, sns.. Amin'ny firenena sasany dia miha malaza izy ireo amin'ny fanomezana boaty pizza maro.
3. Ho an'ny fandefasana fanafody, ny boaty mangatsiaka dia matetika ampiasaina amin'ny famindrana ny réagent biokimia, santionany ara-pitsaboana, zava-mahadomelina, plasma, vaksinina, sns. Amin'izany toe-javatra izany dia ilaina ny fanaraha-maso ny mari-pana.
4. Mandritra izany fotoana izany dia tsara ihany koa izy ireo amin'ny fampiasana ivelany miaraka amin'ny fonosana gilantsika na biriky ranomandry ao anaty boaty, mitazona ny sakafo na zava-pisotro mangatsiaka rehefa mitoby, fitsangantsanganana, sambo ary manjono, satria maivana, mahatohitra fifandonana ary mora diovina.
5. Ary mihamaro hatrany ny mpanjifa manontany ny boaty EPP miloko kely kokoa noho ny fonosana vokatra kely toy ny famantaranandro, satria toa avo lenta sy marefo ary miaraka amina fitaovana vaovao izy ireo.
Haben'ny ivelany （cm）
Halavany * sakany * hahavony
Habe anatiny （sm
Fanamarihana: misy safidy namboarina.
1.Fianarana kilasy sy fitaovana ara-tontolo iainana;
Fitaovana fitondra hafanana 2.Excusive sy haavo avo
3.Miorina tsara kokoa sy mahatohitra fifandonana
4. Mazava ary diovina mora foana
5. endrika tsara ary toa avo lenta
6.Manohana im-betsaka ny fampiasana ary ho simbaina aorian'ny fampiasana
1.EPP boaty mangatsiaka kokoa dia vita avy amin'ny fitaovana eco-friendly izay azo ampiasaina miverimberina ary farany ho simba aorian'ny fampiasana.
3. Miaraka amin'ny fahombiazany tsara indrindra amin'ny fiarovana sy ny insulation, izy ireo dia be mpampiasa amin'ny fanaterana sakafo sy fanafody vaovao, indrindra amin'ny sakafo, voankazo ary legioma.
4. Ho an'ny fampiasana azy manokana, izy ireo dia ho boaty mangatsiaka tsara ho an'ny sakafo sy zava-pisotro rehefa mivoaka.
5.Ny kojakoja namboarina dia misy ilainao.
Teo aloha: Vata mangatsiaka VIP
Manaraka: Vata mangatsiaka plastika